केजीएफमा यशको भूमिका अमिताभ बच्चनका यी फिल्मसँग मिल्दोजुल्दो ! | Janprabhabnews
केजीएफमा यशको भूमिका अमिताभ बच्चनका यी फिल्मसँग मिल्दोजुल्दो !
13th April 2022 , 9:13 मा प्रकाशित
काठमाडौं । साउथका सुपरस्टार यश स्टारर् ‘केजीएफः च्याप्टर २’ रिलिजको लागि तयार छ । यस कन्नड फिल्म १४ अप्रिलबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । केजीएफ अपराध र तस्करीको दुनियाको एक नायकको कथा हो ।
यो फिल्मलाई धेरै बलिउड फिल्महरूसँग तुलना गरिएको छ, जसमध्ये ७० र ८० को दशकका अमिताभ बच्चनका फिल्महरू छन् । हालैको एक अन्तर्वार्तामा अभिनेता यश आफैले उक्त तुलनाका बारेमा खुलेर कुरा गरेका छन् । केजीएफ फ्रेन्चाइजी राँकी (यश)को उदयको कहानी हो । उनी एक तस्कर हुन् जसले कोलार गोल्ड फिल्डमा सुन उत्खनन् साम्राज्यमाथि कब्जा गर्न खोज्छन् ।
यो फिल्ममा सञ्जय दत्त, रविना टण्डन, श्रीनिधि शेट्टी र प्रकाश राज पनि मुख्य भूमिकामा छन् । यो फिल्मलाई अमिताभ स्टारर् दिवार, शक्ति र अग्निपथ जस्ता फिल्महरुसँग तुलना गरिएको छ ।
उक्त सबै फिल्ममा अमिताभ एन्टी हिरो अपराधीको भूमिकामा देखिएका छन् । जो सानो ठाउँबाट उठेर अण्डर वल्र्डमा शासन गर्छन् । उक्त फिल्महरुबाट अमिताभले विशेष पहिचान पाएका थिए । त्यसपछि उनलाई ‘एन्ग्री यंग म्यान’ भनिन्थ्यो ।
बलिउड हंगामासँगको एक कुराकानीमा एक फ्यानले यशलाई सोधेका छन्, के उनी अमिताभ बच्चनको कुनै फिल्मको रिमेक गर्न सक्छन ? जवाफमा यशले भनेका छन्, ‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा रिमेक मन पर्दैन । र, मिस्टर बच्चनलाई नछुनु नै राम्रो हो । उहाँहरु क्लासिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूको जुन काम हो, त्यो म गर्न सक्षम हुनेछु जस्तो लाग्दैन ।’
त्यस्तै केजीएफ केही हदसम्म अमिताभ बच्चनको व्यक्तित्वबाट प्रेरित छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यशले भने, ‘नायक र उनको वीरता त्यस प्रकारको फिल्म । यसको कुनै फिल्मसँग कुनै सम्बन्ध छैन । तर सामान्यतया, उनले जुन प्रकारका फिल्महरू बनाउनुहुन्थ्यो, तिनीहरूको सार भनेको सम्पूर्ण भारतले हेर्न चाहेको हो ।’
‘केजीएफः च्याप्टर २’लाई प्रशान्त नीलले निर्देशन गरेका हुन्, जसले पहिलो भाग पनि निर्देशन गरेका थिए ।